Madaxweyne Gaas oo Gaadiid & Hanti badan oo xildhibaanada cusub ku casuumay Iyo Codka Xildhibaanada oo caawa Garowe ka maraya – Somali Broadcasting Service
Madaxweyne Gaas oo Gaadiid & Hanti badan oo xildhibaanada cusub ku casuumay Iyo Codka Xildhibaanada oo caawa Garowe ka maraya
Waxaa cirka isku sii shareeraya sixirka caawa lagu kala gadanayo codadka xildhibaanada Baarlamaanka Puntland.
kaas oo sare u kac xoogan laga dareemayo xili doorashadii madaxtinimadu ay ka hadhsan tahay saacado kooban.
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Puntland ayaa dalab qaali ah ka helay madaxtooyada Puntland iyo madaxweyne Gaas, waxaana qaarkood la gudoonsiiyeyba caawa gaadiid iyo hanti badan si ay codadkooda ugu deeqaan madaxweynaha xiligu kasii dhamaanayo Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas.
Gaadiidka raaxada iyo Boqolaal kun oo Dollar ayaa la dul dhigay xildhibaanada, waxaana madaxtooyada Puntland ay haatan dadaal xoogan ugu jirtaa sidii ay kalsooni buuxda uga heli lahayd xildhibaanada Baarlamaanka.
Iibsiga codka xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa fiidnimadan caawa ah Garowe ka maraya ilaa 70 Kun oo Dollar, waxaana musharax walba uu hanti ku bixinayaa sidii uu codad dhamaystiran ku heli lahaa.
Madaxweyne Gaas ayaa ilaa hada haysta 30 xildhibaan, kuwaas oo u badan xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Musharaxiinta loolan adag ugu jira xilka madaxtinimada Puntland ayaa xooga saaraya kala qaybsiga iyo kala hororsiga xildhibaanada.
Amaanka magaalada Garowe ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana lagu soo rogay Bandow 9:30 fiidnimo wixii ka dambeeya ma jiro doonaan wax gaadiid ah oo shaqayn doona.
Xildhibaanada, musharaxiinta iyo madaxda xukuumadda Gaas ayaa loo ogolaaday in ay wataan gaadiid kooban si danahooda ay ugu qabsadaan.
Author adminmasterPosted on January 7, 2019 Categories Hot Topics / War Cusub, News, Puntland
Previous Previous post: Khudbadda Murashax madaxweyne Puntland Dr Cali Ciise Cabdi
Next Next post: Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Puntland halkan hoose kala soco